LG N20 တွင် Android Nougat ပိုင်ဆိုင်ထားသည့်တီဗီသစ်တစ်ခုကို LG ထုတ်ဖော်ပြသလိုက်သည် Gadget သတင်း
El LG က V20 တောင်ကိုရီးယားနှင့်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတွင်တစ်ပြိုင်တည်းကျင်းပမည့်အဖြစ်အပျက်နှစ်ခုအားစက်တင်ဘာ ၆ ရက်တွင်တရားဝင်ပြသမည်ဖြစ်သည်။ ထိုနေ့သည် LG ၏အထင်ကရအသစ်ဖြစ်လာလိမ့်မည် Android 7.0 Nougat အသစ်ဖြင့်ဈေးကွက်ထဲပထမဆုံးတင်ပို့သောစမတ်ဖုန်းဖြစ်သည်.
LG ၏ terminal အသစ်နှင့်တွေ့ဆုံရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရက်အနည်းငယ်ကျန်ရှိသော်လည်းတောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည်ယခု V20 လွှတ်တင်သည့်နေ့ရက်နီးလာသည်နှင့်အမျှပတ်ဝန်းကျင်ကို ပိုမို၍ အပူပေးနေသည်။ ဒီအတွက်သူတို့ဟာ Nougat ကိုဒီနေ့အသစ်တီထွင်လိုက်ပြီ။
စက်တင်ဘာ ၆ တော်တော်လေးချိုမြိန်နေတယ်။ အဘယ်အရာကိုကြည့်ပါ # LGV20 နှင့် @Android Nougat box ထဲကထွက်နိုင်ပါတယ်။https://t.co/0P9fMtH1W1
- LG USA Mobile (@LGUSAMobile) သြဂုတ်လ 26, 2016
Twitter မှာတင်ထားတဲ့ဗွီဒီယိုထဲမှာ LG V20 အသစ်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည့် Android Nougat ၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပြသထားသည်များစွာသောလုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ အချို့ application များမှအချို့သောမက်ဆေ့ခ်ျများမှ၊ အသိပေးချက်များမှ (သို့) control panel ၏မြန်ဆန်သောအချက်များနေရာချထားခြင်းကဲ့သို့ရိုးရှင်းသောအရာတစ်ခုခုမှတိုက်ရိုက်ဖြေဆိုနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်အံ့အားသင့်စရာတစ်ခုအနေဖြင့် LG v20 ကင်မရာကကျွန်ုပ်တို့အားပေးမည့်အရည်အသွေးကိုလည်းတွေ့နိုင်သည်။ LG ထုတ်ဝေသောဗွီဒီယိုကိုစက်တင်ဘာ ၆ ရက်တွင်တရားဝင်တင်ဆက်မည့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်အသစ်ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ငါတို့သိနှင့်ပြီးသားဖြစ်သည်။
LG V20 အသစ်သည်လူကြိုက်များသော Galaxy S7 သို့မဟုတ် iPhone 6s နှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုသင်ထင်ပါသလား။.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » NOTICIAS » LG N20 တွင် Android Nougat ရှိသည်ဟုဝါကြွားသော LG VXNUMX အသစ်ကိုတီထွင်လိုက်သည်